नुवाकोटमा कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट भेटियो, सुरक्षित रहन त्रिशुली अस्पतालको आग्रह (बिज्ञप्ती) – Sapana Sanjal
July 10, 2021 161
Sapana Sanjal : नुवाकोट । नुवाकोटमा कोरोनाको डेल्टा प्लस अर्थात तेस्रो भेरियन्ट देखिएको छ ।
जिल्लाको त्रिशुली अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएका केसहरुमध्ये ४ जनाको राष्ट्रिय जनश्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो ।”
जसमध्ये १ जनामा तेस्रो भेरियन्ट अर्थात डेल्टा प्लस भेरियन्ट देखा परेको जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीले जनाएको छ । साथै पहिलो, दोस्रो भन्दा भन्दा यो भेरियन्ट ६० देखि १०० प्रतिशत भन्दा बढी खतरानक रहेको छ ।
नेपालमा तेस्रो लहर अर्थात् ‘डेल्टा प्लस’ भेरियन्टको जोखिम कति?
कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरियन्टले विश्वभर चिन्ता बढाएको छ। डेल्टा भेरियन्टका कारण नै नेपाल, भारतलगायत देशमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएको मानिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का अनुसार कोभिड-१९ को डेल्टा भेरियन्ट संक्रमितहरूको करिब एक सय देशमा भेटिइसकेका छन्। अबको एक महिनासम्ममा डेल्टा भेरियन्टको संक्रमण विश्वका अधिकांश देशमा पुग्नसक्ने र यसले जोखिम बढाउने भन्दै डब्लुएचओले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
नेपालमा डेल्टा प्लस भेरियन्ट फैलिएको पुष्टि भइसकेको छ। पहिलोपटक भारतमा पुष्टि भएको कोभिड–१९ भाइरसको डबल म्युटेन्ट स्ट्रेन (बी.१.६१७.२)लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले डेल्टा नाम दिएको हो। डेल्टा भेरियन्टमा ‘के४१७एन’ नाम दिइएको नयाँ म्युटेन्टसँगको संयोगबाट बनेको भेरियन्टलाई ‘डेल्टा प्लस'(एवाई.१ वा बी.१.६१७.२.१) भन्न थालिएको ‍बताउँछन् शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग विशेषज्ञ अस्पतालका रिसर्च युनिटका संयोजक डा. शेरबहादुर पुन।
नेपालमा हाल दैनिक २ देखि ३ हजारको हाराहारीमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। कुल परीक्षणको अझै पनि २० प्रतिशतभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि हुँदै आएको छ। दोस्रो लहर आउनु अगाडिका क्रियाकलापहरु जस्तै भीडभाड, सभा–सम्मेलन र जुलस लगायतका गल्ति पुनः दोहोरिए तेस्रो लहरमा अझ धेरै मानिस संक्रमित हुन सक्ने जनस्वास्थ्यविद्हरूको भनाइ छ। नेपालका लागि अझै पनि संक्रमणको जोखिम कायम नै रहेको जनस्वास्थ्यविद्हरू बताउँछन्।
Prevसंसारकै सबैभन्दा सानो पुन्टे गाई, सामाजिक सञ्चालनमा चर्चित बन्दै, देख्नेहरु हेरेको हेर्यै भए (भिडियाेमा हेर्नुस्)
Nextगुरु पद्मसम्भवको दर्शन गरि आजको दिनको सुरुवात गर्नुहोस् ! तपाईको दिन शुभ रहोस्